FIIRSO: Muqdisho Wadada Genaraal Daa’uud oo Xiran ka dib Boholo waa weyn oo ka Sameesmay? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA FIIRSO: Muqdisho Wadada Genaraal Daa’uud oo Xiran ka dib Boholo waa...
FIIRSO: Muqdisho Wadada Genaraal Daa’uud oo Xiran ka dib Boholo waa weyn oo ka Sameesmay?
Halkaan waa wadada” Caanka ah ee Jenaral Daa’uud waxaa’ aay dhex marta Degmooyinka Warta-nabada iyo Boondheere waxaa’ ka muuqda bur bur xooggan’weyna xiran tahay gebi ahaanba.
Jidka taga Isgooyska Boondheere ee ka taga isgoyska Siinaay’ gaadiidka nuucyadiisa kala duwan ma isticmaali karaan waqtiga hadda la joogo maxaa-yeelay’ waxa’ ka sameesmay” boholo waa- weyn mana jirto ‘cid u istaagtay sidii dib dayac tir loogu sameyn lahaay.
Sidoo kale waxaa dhex fadhiyo biyo midabkoodu doorsoomay wasaq ah qeyb ka mid ah ‘wadadaasi oo gebi ahaanba xirmatay.
Waxaa” mar aan sidaas u fogeyn is xilqaamay dadka deegaanka ayaga oo Baabur gawaari caro kaawo ah ku shubay balse”roobabkii ugu danbeeyay ee Muqdisho ku hooray ayaa bur bur xooggan u geestay sida u Warbaahinta shaaciye.com oo halkaasi booqatay u sheegay mid ka mid dadka deegaanka oo sheegay in dhibaato xoogan ku qabaan jidkaan maadama aan la isticmaali karin.
Waxaa’ sidoo kale dadka deegaanka” Shaaciye.com aay u sheegen in mar dib u dhiska wadadaasi shaqiysaad Jaaliyadaha dibada ugu soo aruursadeen lacago badan ka dibna jeebkooda ku shubteen halka laga rabay in aay wadada ku dhisaan” taaso ah wax laga xumaado.
Dadka deegaankaasi degan ayaa Maamulka Gobalka Banaadir oo uu’ ugu horeeyo Gudoomiye Taabid Cabdi Maxamaed ‘ugu baaqay in dib dayac tir loogu sameeyo wadadaasi” maadama- aay ka mid tahay wadooyinka Ugu caansan Magaalada Caasimada ee Muqdisho.
Maamulka Gobalka Banaadir oo loogu fadhiyay in u wax ka qabto dhismaha ama dib u dayac tirka dhabahaasi ayaa ka gaabsaday in u wax ka qabto maadama wadooyinka la mid ah ahaay horey loogu sameyay dayac tir.
Xafiiska Shaaciye Muqdisho